EthioLex.com | FDRE Laws | A Bilingual and Comprehensive Gateway to Ethiopian Federal and State Laws
EthioLex.com | FDRE Laws
Mootummaan Federaalaa Itoophiyaa qaama seera baaftuu, seera raawwachiiftuu fi seera hiiktuu qaba. Manni Maree Uummataa Itoophiyaa qaama seera baaftuu olaanaa Mootummaa Federaalaa dha. Manni maree kunis bu’uura Heera Itoophiyaa keewwata 52 fi 55tiin dhimmoota aangoo federaalaa keessa jiran irratti labsiiwwan ni tuma. Manni Maree Ministeerootaas labsiiwwan tumaman raawwachiisuuf dambiiwwan ni tuma. Akkasumas Biirooleen Ministeerootaa, Komooshinoonnii fi Ejensiiwwan Mootummaa Federaalaa seerota bahan raawwachiisuuf qajeelfamoota raawwii ni baasu.
Yeroo ammaa Amaariffi afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta’uun akka tajaajilu Heera Itoophiyaa keewwata 5(2) jalatti tumamee jira; qophummaadhaanis afaan hojii federaalaa ta’uun tajaajiluutti argama. Kanaaf, labsiiwwan, dambiiwwanii fi qajeelfamoonni raawwii federaalaa Afaan Amaariffaa fi Ingiliffaan maxxanfamaa jiru.
Labsiiwwan, dambiiwwan fi qajeelfamoonni raawwii mootummaa Federaalaan tumamaman murtiiwwan M/Murtii Waliigalaa Dhaddacha Ijibbaata maxxanfaman (Amaariffaan kan maxxanfamaa jiru) waliin ta’uun magaalaa Finfinnee (Addis Ababaa) fi Dirree Dhawaa keessati sirna seeraa raawwii qabaatani dha. Haa ta’uyyuu malee yoo aangoo Itoophiyaa guutuuf dhimma ta’e irratti mootummaan federaalaa seera akka tumuuf ifaan kaa’ameera ta’e seeroonni akkasiin mootummaa federaalaan tumaman kun Itoophiyaa guutuutti raawwii qabaatu.
Fuulli Intarneetaa kun seerootaa fi poolisiiwwan federaalaa isiniif dhiheessee jira. Fuula kana irratti seeronni federaalaa fi barruuleen isaan ilaalchisuun barreeffaman guutummaan akka dhihaataniif kan isin bira jiru teessoo keenyaan yoo nuuf ergitan hedduu isin galatoomfanna.
Seerota fi poolisiiwwan Federaalaa arguufis ta’e buufachuuf liinkii armaan gadii hordofaa:
Murtiiwwan Dhaddacha Ijibbaataa M/M/W Federaalaa